चार कराेड चाहिन्न भन्दै संसदमै धुरूधुरू राेए सांसद (भिडियाे सहित) - Himalayan Kangaroo
चार कराेड चाहिन्न भन्दै संसदमै धुरूधुरू राेए सांसद (भिडियाे सहित)
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १०:४५ |
काठमाडाैं । सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले अर्थमन्त्रीले सांसदहरुको अपमान गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै रुनुभएको छ ।
२०७५ /0७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विहिबार आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा सांसद महत प्रतिनिधी बैठकमै रुनुभएको हो । समाजवाद उन्मुख नभई सांसद तह लगाउने बजेट सरकारले ल्याएको र अर्थमन्त्रीले सांसदहरुको अपमान गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘कोही मन्त्री भएँ भन्दैमा हामीलाई बाधेर राख्न पाईन्छ भन्या ? हामीलाई तह लगाउन पाईन्छ ? हामीलाई अपमानित गर्न पाईन्छ ? हामीलाई वडाअध्यक्षको ठाउमा लिएर राख्न पाईन्छ भन्या ?कोही मन्त्री हुदैमा पाईन्छ ? त्यो अधिकार कसैलाई छ चाहिने कुरा गर्नुहोस् न भन्या । चाहिएको छैन हामीलाई ४ करोड ? ४ करोडले आपुहरुको असाध्यै अपमान गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य बसालेर विनियोजन गर्नुपर्ने ? कहि मिल्ने कुरा हो । कसैले सहन्छ ?’
आफ्नो विरोधले केही नहुने जान्दा जान्दै पनि आफूले बजेटप्रतिको असन्तुष्टि राख्नु परेको उल्लेख गर्दे उहाँले भन्नुभयो ‘बजेटको मैले बचाउ गरिरनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । कमजोर बस्तुको बचाउ गरिन्छ बलियो बस्तुको सायद बचाउ गरिन्न । सिति मिति सायद यो हल्लिदैन । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो तपाईहरुको विरोधले मलाई केही हल्लाउदैन । मैले त्यही शब्द सापटी लिएँ । विरोधले खासै हल्लिने देख्दिनँ । तर पनि बजेटले मलाई हल्लाईरहेको छ । हुम्लालाई हल्लाइरहेको छ ।’
बजेट शहर केन्द्रित भएको भन्दै उहाँले कर्णाली र जुम्लालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बजेट मेरा लागि आकाशको फल आखा तरी मर, लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै, न घरको न घाटको, न हर्ष न विस्मात छ । मेरा लागि र मेरो जुम्लाका लागि ।’
रोजगारीको जिम्मा सबै बैकलाई र स्वास्थयको जिम्मा बिमा संस्थानलाई दिने सरकारको निति गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो ‘हिजोका सामन्त र मुखियाहरुले आज बैक थापेर बसेका छन् जसलाई रोजगारीको जिम्मा लगाईएको छ । स्वास्थ्यको जिम्मा बिमा संस्थानलाई लगाईएको छ । कर्णाली र जुम्लाका जनता विमाको कागत लिएर कहाँ जाने ? काठमाडौ आउन जान ५० हजार भाडा लाग्छ । बिमा कागज लिएर म कता जाने ?’
Previousडन्डीफोर र कालोपोतो हटाउनको लागि उपयोगी टिप्स
Nextरणबीर कपुरले स्वीकारे आलिया भट्टसँगको सम्बन्ध !
इमेल र इन्टरनेटको मारमा हुलाक सेवा, व्यक्तिगत चिठीपत्रको आदानप्रदान शून्य
२५ असार २०७५, सोमबार ०३:०७
अष्ट्रेलियामा एरोस्पेस इञ्जिनियरिङ्ग पढाइ हुने युनिभर्सिटीहरु
१५ आश्विन २०७५, सोमबार ११:३२
चारदिनदेखि बालक बेपत्ता
३ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०८:१३
७ चैत्र २०७३, सोमबार ०३:१६